Himalaya Dainik » कोरोनाभाइरसमा देखिएको परिवर्तनले वैज्ञानिकहरू छक्क !
कोरोनाभाइरसमा देखिएको परिवर्तनले वैज्ञानिकहरू छक्क !
बीबीसी- अहिले विश्वव्यापी महामा’री बनेर फै’लिएको कोरोनाभाइरसमा सयौँ म्यूटेशन अर्थात् आनुवंशिक संरचनामा हुने परिवर्तन देखिएको अमेरिका तथा यूकेका वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन्।
तर तिनबाट हुने विकृतिले कोरोनाभा’इरस मानिसमा फैलिनुमा तथा खोप निर्माणमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने स्पष्ट छैन। भाइरसहरूमा उत्परिवर्तन अर्थात् आनुवंशिक संरचनामा परिवर्तन भइरहन्छ। तीमध्ये कुन परिवर्तनले भाइरसको स’ङ्क्रमणशक्ति र रोगको सघनतामा प्रभाव गर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो।
योपनि पढ्नहोस्– ‘कोरोना सङ्क्रमित’ बच्चा आईसीयूमा हुँदा आमाको मन कस्तो होला (भिडियो)
अमेरिकामा गरिएको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले D614G नाम दिइएको उत्परिवर्तन प्रमुख रहेको र त्यसले रोगलाई अझ स’ङ्क्रामक बनाउन सक्ने सङ्केत गरेको छ। उक्त अध्ययन अरू वैज्ञानिकबाट समीक्षा हुन तथा जर्नलमा प्रकाशित हुन बाँकी छ।
न्यू मेक्सिकोस्थित लस एलमो राष्ट्रिय प्रयोगशालाले कोरोनाभाइरसको सतहमा हुने स्पाईक प्रोटीनलाई नियालिरहेका छन्। उक्त प्रोटीनका कारण कोरोनाभाइरसको स्वरूप भिन्न देखिन्छ।
योपनि पढ्नहोस्- पुरुषको वी’र्यमा पनि भेटियो कोरोना भाइरस
उनीहरूले ग्लोबल इनिशीअटिभ अन शेअरिङ अल इन्फ्लूएन्जा डेटा नामक डेटाबेस प्रयोग गरेका छन्। उनीहरूले यही उत्परिवर्तनका कारण कोरोनाभाइरस चाँडै फैलिएको हुन सक्ने बताएका छन्। तर यसको परिणाम अझै अस्पष्ट छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूको उक्त टोलीले यूकेको शेफील्डमा बिरामीबाट सङ्कलित डेटाको पनि विश्लेषण गर्‍यो। उत्परिवर्तन भएको विषाणु फेला परेका बिरामीबाट सङ्कलित नमुनामा धेरै कोरोनाभाइरस पाइएको भए पनि ती मानिस धेरै बिरामी भएको वा लामो समय अस्पताल बस्नुपरेको प्रमाण भेटिएन।
यूनिभर्सिटी कलेज लन्डनले गरेको अर्को अध्ययनले कोरोनाभाइरसमा १९८ वटा उत्परिवर्तन भएको पत्ता लगायो। उक्त अध्ययनमा सहभागी वैज्ञानिक प्राध्यापक फ्रान्स्वाँ बलोले भने, “उत्परिवर्तन आफैँमा नराम्रो कुरा हैन। अनि SARS-CoV-2 (कोभिड-१९ गराउने नयाँ कोरोनाभाइरसको वैज्ञानिक नाम) मा छिटो वा ढिलो उत्परिवर्तन भइरहेको सङ्केत गर्ने कुनै आधार छैन।”
उनका अनुसार उक्त भा’इरस धेरै वा थोरै घा’तक तथा सङ्क्रामक हुँदैछ भन्ने स्थितिमा हामी छैनौँ। यूनिभर्सिटी अफ ग्लास्गोमा गरिएको अर्को अध्ययनमा उत्परिवर्तनहरूका कारण नयाँ किसिमका भाइरस बनेका छैनन्। अहिले फैलिएको कोरोनाभाइरस एउटै किसिमको भएको त्यहाँका अनुसन्धानकर्ताहरूको निष्कर्ष छ।
भाइरसमा हुन ससाना परिवर्तनको जानकारी पनि खोप विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। फ्लू गराउने भाइरसमा यति चाँडो उत्परिवर्तन हुन्छ कि त्यसबाट बन्ने फरक किसिमको भाइरसका लागि प्रत्येक वर्ष नयाँ खोप बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
अहिले निर्माणको चरणमा भएका अधिकांश कोभिड-१९ खोपहरूले कोरोनाभाइरसको स्पाईक अर्थात् काँडाजस्तो अवयवलाई लक्षित गरेका छन्।
यो अवधारणामा मानिसको शरीरमा उक्त अवयवको एउटा विशिष्ट तत्त्वलाई चिन्ने गुण विकास गराएर उक्त भाइरसलाई निष्क्रिय पार्न सकिन्छ भन्ने छ। स्पाईकमा परिवर्तन भइरहे अहिले बनाउन लागिएको खोप कम प्रभावकारी भइदिन सक्छ। तर अहिले सबै कुरा सिद्धान्तको तहमा छन्। उक्त भाइरसको आनुवंशिक संरचनामा परिवर्तन हुँदा के हुन्छ भन्ने पर्याप्त जानकारी अहिले उपलब्ध छैन।